5 Ngozi Social Media — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Guest pambiru kubva Jessica Barefield
Regai kutanga nokupa Disclaimer. Nyaya iyi haisi sei zvakaipa evanhu vezvenhau ndiko. Zvinoshandiswa mwero, nemoyo yakarurama mamiriro, inogona kuva chinhu chakanakisisa chaizvo. Pfungwa ino ndiko kuratidza dzimwe nzira kuti magariro evanhu vezvenhau kunogona kuva musungo wakabata upenyu hwechiKristu uye kukukurudzira kuongorora mwoyo wako kana totaura yako mumagariro vezvenhau zvinodyiwa uye kupindurawo. Ava munzira shanu evanhu vezvenhau kunogona zvokudya zvido zvedu vezvivi.
1. Social Vezvenhau vanogona kutambisa nguva yako
Hachizi hatina kumbonzwa, asi zviripo vachidzokorora. Tinoyeuchidzwa muna VaEfeso 5:16-17 kuti mazuva akaipa uye tinofanira kushandisa zvakanaka nguva yakapiwa kwatiri. Chimbofunga kwekanguva chii unogona kuita pane vachiongorora nzvimbo vose. Akamira waari, tinogona kuramba mazita vanhu kunyengeterera pamusoro foni yedu uye kupedza imwe maminitsi iwayo mumunyengetero kuti mhuri yedu uye neshamwari. zvechokwadi, pane imwe nguva kana kuti imwe, tine mhosva maawa on Facebook pazuva uye haana kuzarura Shoko raMwari rose. Sezvo neimwe nguva chipo chinobva kuna Jehovha, izvozvo zviripo uchizvibvunza, "Pane chinhu chinobatsira zvikuru kuti ndaigona kuva kupedza nguva yangu?"Vazhinji nguva, mhinduro zvichida hungu.
2. Social vezvenhau anopa chikuva kupfungwa dzenyu dzose
Ndinofunga yokubatana pamusoro vaiswe pamusoro evanhu vezvenhau kunogona kumunyengera ufunge zvakanaka kuposita nachero chinhu. We vanotsutsumwa, isu anonymously bash vanhu, isu havaremekedzi vanhu simba, uye isu vanoti chero tinofunga mukurumbira, sokunge vakanga vasiri vanhu chaivo. Uye isu tinotenda hatidi chaizvo kupindura nokuti zvacho. Usanyengedzwa nokuda toga mumba mako iye zvino-kuchava chinhu toga kana tomira pamberi paMwari mupenyu uye rondedzero mashoko edu. Matthew anotinyevera runako pachena, "Pazuva rokutonga, vanhu vachazvidavirira nerimwe ravakataura risina shoko Vanotaura. "Ngatiitei tiyeuchidzwe achinyevera inotevera nguva ino isu kunatsurudza mamiriro edu.
3. Social Vezvenhau vanogona mupopotedzane discontentment
Kana tinopedza dzimwe nguva yokunaya pamusoro chii nevamwe vari kuita uye achiti, izvozvo anoita kuti tifunge zvose hatina kana uri kurasikirwa. Kunogona kukonzera isu nechokwadi nei hwedu havatariri zvakafanana. Nei ndisina kufunga kuti mazwi? Ndinoshuva ndakava pfungwa yake zvidavado. imba yavo itsva ndiyo nzira anokura kupfuura zvedu! Kana tikasangwarira, maminitsi makumi matatu on Facebook kana Pinterest anogona kukusiya uchinzwa haubereki, asingakwezvi, uye underwhelmed pachedu upenyu hwako. Hebrews rinotirayira, "Rambai hwako upenyu wakasununguka kubva kuda mari, uye mugutsikane nezvauinazvo, nokuti Iye akati, 'Ndicharova kuzovasiya kana kukurasa.' "Tinogona pakupedzisira kugutsikana hwedu sevatendi nokuti tiri kupiwa zvose zvatinoda muna Kristu. Zvibvunze kuti kushandisa kwaunoita chinzvimbo vezvenhau ari kubatsira unotenda chokwadi ichi.
4. Social Vezvenhau vanogona mupopotedzane kudada uye murambe iwe nechomukati dzirambe
Social Vezvenhau vanogona kukurumidza kuva pakagadzirwa nematanda hwedu nokuda kuzvisimudzira. Tinofanira kuzvibvunza chii vavariro yedu chaizvoizvo kuti vaiswe zvinhu zvatinoita. Tiri kutsvaka tsitsi kana kurumbidzwa? Hatidi kuti zvakanaka vakafunga kana kuzvikudza pamusoro mafaro zvinhu tanga kuita? Unoziva nguva tarisa vangani "likes" kana "retweet" yenyu romukova akamuka? Zvose izvi mupopotedzane rudado uye tirambe takatarira pachedu. Izvi zvinogona kuva musungo kunyanya nesimba uyo ane chikuva kuti kunosvika seri shamwari dzavo uye nemhuri. Ungave uchiita mumhanzi kana kuva akakurumbira Blog, nokuti zviuru zvevanhu vari kuteerera hazvirevi zvose anouya mupfungwa kunokosha achiti. Tinofanira kuyeuka kuti retweet, mashoko, uye likes havangoerekani vapiwa kupa Mvumo kuti isu kuposita. Mwari anoona pachii yedu uye haana kunyengedzwa patsime-akarigadzirira romukova. Sezvo ini Samuel 2:3 anonyevera, "Musaramba kutaura kudaro manyawi kana kurega muromo wako kutaura kuzvikudza kwakadaro, nokuti Jehovha ndiMwari anoziva uye naye mabasa avanhu anoyerwa. "
5. Social Vezvenhau zvinogona kukanganisa maonero atinoita ukama
Nokuti ose anobatsirwa evanhu vezvenhau rwaanarwo ukama, pane drawback. Zviri nyore kuti kufambirana ndivo waunoda (pamwe nyore?). Ko uchiri zvakadzama, chinangwa Kukurukurirana vari munhu? Zviri nyore kuti kuramba aine vanhu vakawanda waunoda-uye vanhu vakawanda imi havatombozivi (pamwe vakawanda?). Uri oversaturated pamwe nezveupenyu 300 upenyu hwevanhu kuti hausi kuita basa rakanaka wokuda 10 vanhu ukaona vhiki nevhiki? Tinogona kukurumidza kudzidzisa pachedu kuva vatengi mashoko pachinzvimbo vanoda vanhu. Kuziva pamusoro upenyu yomumwe kugoverana zvose nezveupenyu hwako Via evanhu vezvenhau hakuna kufanana nokuva shamwari chaiyo. Zvechokwadi Jesu ndiye muenzaniso zvazvinoreva kuva shamwari yechokwadi akakwana. Jesu anodzidzisa, "Murayiro wangu ndouyu: Dananai sezvo ini ndakakudai. Hakuna une rudo rukuru kune urwu, kuti ape upenyu hwake nokuda kweshamwari dzake. "Ushamwari inopfuura Verengai chinzvimbo inogadziridza uye mifananidzo. Ushamwari chibayiro. Zviri mitoro nemumwe. Hazvingobatanidzi rakapotsa nacho-kunofanira kuva chinobatika.
Jessica Barefield anogara Washington D.C. nomurume wake Trip, uye mwanakomana wavo Q. Unogona kuverenga zvakawanda kubva kwaari panguva yake Blog, Like To Love.
Xavier • Gunyana 24, 2013 pa 12:18 pm • pindura
Izvi ndezvechokwadi zvokuti. Ndinobvuma pachena kuti ini kutambisa maawa uye maawa nguva yangu uye mazuva pamusoro evanhu vezvenhau vose pfungwa vakauya mberi, Ndinogona kunzwisisa zvakananga. Ndinoziva mupfungwa dzangu nemwoyo kuti ndinoda uye kuti vakatorega, kana zvikuru yezvoupfumi, asi hazvisi nyore. Asi shoko imi kunyora uye mashoko aMwari kuti uri kushandisa kusimbisa ichi kutaura neni zvakajeka. Ndinokutendai nokuti nyaya ino :)
Ashley • Gunyana 24, 2013 pa 12:19 pm • pindura
Great romukova! Kwakaita kuti ndinyatsofunga uye funga kwangu nevamwe vezvenhau kushandiswa!
Tyron • Gunyana 24, 2013 pa 12:21 pm • pindura
Very zvakanaka iverengwe! Kumboiswa munyaya network kusvikira pfuurei gore rakapera uye izvi zvimwe zvezvikonzero nei. Handina akatopiwa kufunga deleting pasocial network vangu pfungwa zvinofanira vakaomerera. Roti zvakanaka pfungwa pano. Tinokutenda nokutora nguva yako kunyora uye kugoverana.
Daniela • Gunyana 24, 2013 pa 12:27 pm • pindura
Wow! Saka zvechokwadi. Zvechokwadi I kugadzirisa kwangu nevamwe vezvenhau yaunodya. Chiri chaizvo unoparadza mumwe chaizvo zvikonzero Ndakarega kuwana musi Pinterest. Ndinokutendai nokuti kugoverana.
Jay • Gunyana 24, 2013 pa 12:51 pm • pindura
Hapana pfupi pamusoro wakakomborerwa
Stacey • Gunyana 24, 2013 pa 12:57 pm • pindura
Ndinokutendai zvikuru nokuda vaiswe ichi. Ndave mutsimba pachangu nezvokuziva on Facebook. Sokuti manjemanje zvose zvinoshanda zviri kuita anopenga kutsamwa. Ichi chaiva zvose zvandaida kunzwa uye ndichaita verengaizve kana ini dzinofanira kuyeuchidzwa. Mazvita uye Trip. Mwari komborera.
Mishaeri • Gunyana 24, 2013 pa 1:20 pm • pindura
Eulaivi Clutario • Gunyana 24, 2013 pa 1:30 pm • pindura
Uri kurudziro! Naizvozvo vazhinji zvakanaka pfungwa une pano. Rumbidzai Mwari uchenjeri dzenyu zvinonzwisisika uye rinokosha chaizvo kuchizvarwa yedu! :)
ehe • Gunyana 24, 2013 pa 1:48 pm • pindura
Ini Warigirwa kuti mwoyo kugovana ichi simba. Ndinotenda tiri tose akawanikwa wakataira munharaunda iyi. Thanks Trip uye Jessica. Mwari anogona kuramba kukushandisa .
Caleb • Gunyana 24, 2013 pa 2:15 pm • pindura
Wagona kutaura! Wandakamboda zvimwe izvi pfungwa chete pamusoro munzanga vezvenhau mumakore muripo makore. Ramba kunyora!
nzira • Gunyana 24, 2013 pa 4:56 pm • pindura
Ndinoda ichi!!!! Saka saka zvechokwadi uye ndinoshuva zvikuru vanhu kunzwisisa pfungwa idzi!
Themba • Gunyana 25, 2013 pa 5:49 ndiri • pindura
uri zvechokwadi rakafuridzirwa kuchizvarwa ichi. Wagona kutaura!!!
NACLARA • Gunyana 26, 2013 pa 4:27 ndiri • pindura
Ndinokutendai zvikuru Jessica nokuti mashoko aya zvokuti wechokwadi uye kutendiswa kupiwa. Mwari arambe kukushandisa uye iwe neveimba :-)
Angela • Gunyana 26, 2013 pa 5:27 pm • pindura
Ndinokutendai nokuti ichi anojekesa romukova! Izvi zvinofanira anotibatsira kutarisisa edu Jesu uye zvishoma pane vamwe uye nokuzvidzora.
JAMES • Gunyana 26, 2013 pa 5:27 pm • pindura
Zvikuru…. Rumbidzo kuna Mwari oga….
maka • Gunyana 26, 2013 pa 5:36 pm • pindura
Ndotenda kwazvo, nokuti “shoma vanhu” pamwe kubva nenzwi naro anotaura nhamba kufunga kwedu “mumagariro” ukoshi rinobva evanhu nevezvenhau. Thanks nokuti panogasa vachikotsira !
Jimmy McCrary • Gunyana 26, 2013 pa 5:38 pm • pindura
Oyishoma Emmanuel • Gunyana 26, 2013 pa 5:40 pm • pindura
Izvozvo ndezvechokwadi chaizvo. Tinopedza nguva inokosha pamusoro network pasina chinangwa, uye pose chinangwa haisi paivhu, kushungurudzwa hakudzivisiki. Ini ndine mhosva iyi nguva; Asi ndinonyengeterera kuti nyasha kuna Redirect dzangu pokutanga.
adin Moore • Gunyana 26, 2013 pa 5:44 pm • pindura
Ichi zvechokwadi yakanaka mumhanyi. Ndinokutendai nokuti kuudzawo pamwe nesu, anakidzwa nokuriverenga uye okutanga maziso angu misungo munzanga nevezvenhau. :) nyasha & runyararo.
Joseph • Gunyana 26, 2013 pa 6:03 pm • pindura
Chaizvo nei Ini zvachose dzadzimwa Fakebook wangu mangwanani 2012. Sezvakaita kumusoro sei Ndakapa waya TV munyika 2001, Handina kurasikirwa kana Fakebook kana TV. FB zvinoita nyore kuda pachako, ndiko kunamata zvifananidzo. Ari pakombiyuta basa (Video fora) zvinonyanya chikonzero nei handidi kupedza nguva pairi wangu nguva, asi zviri nyore kuitira kuti kutambisa nguva kombiyuta. Ini kana ndiri pamusoro YouTube, zviri kuona pakusimbisa mavhidhiyo kubva vamwe vaKristu. Ini HUNONYANYA vanokurudzira muKristu wose kuverenga nyaya ino: “Achigadzira Remweya hwedu Facebook” kubudikidza Shane Hipps (Second Nature Journal tira ru)
Leticia • Gunyana 26, 2013 pa 6:25 pm • pindura
Very anotokonya pfungwa!
OK • Gunyana 26, 2013 pa 6:41 pm • pindura
Wow, mukuru pambiru, Ndiri wakakomborerwa chaizvo.
Barbara • Gunyana 26, 2013 pa 6:56 pm • pindura
OMG ndakanga saka nemhosva svondo rapera nokuda chaizvo iwe wakati …kupedzera maawa on Facebook kuti unofanira kupedza shoko! Ndinoda Blog ichi…kuchengeta zivo kuuya!
Priscilla • Gunyana 26, 2013 pa 6:58 pm • pindura
Ndinofarira mwero paumire; kwete zvachose kushora pasocial nevezvenhau, asi Zvairatidza nyaya / muitiro nokuda nezvivi. ini nezvokuratidzwa iLove.
Rochelle • Gunyana 26, 2013 pa 7:05 pm • pindura
points..thanks zvakanaka nokugoverana yandaida naro .
Christine • Gunyana 26, 2013 pa 8:16 pm • pindura
Ndinokutendai nokuti kugoverana! Excellent zviyeuchidzo sei tinofanira vanoyambira pachedu kana totaura evanhu vezvenhau.
Susan • Gunyana 26, 2013 pa 8:29 pm • pindura
Ndinokutendai Jessica nyaya ino & mazvita rwendo nokuda vaiswe pasi FB saka ndaigona kuzviona & uyai Blog kuriverenga.
Liz • Gunyana 26, 2013 pa 8:41 pm • pindura
Great nyora vakakwira! Anotokonya pfungwa nokuti chokwadi…cherechedza kuzvida!
Christa • Gunyana 26, 2013 pa 8:56 pm • pindura
Wow! Izvi zvinoshamisa! Ose pfungwa chandirova uye ini chaizvo vaifanira kunzwa. Ndotenda kwazvo. Mwari komborera!
pingi • Gunyana 26, 2013 pa 9:23 pm • pindura
Ndinokutendai chaizvo kunyora izvi. Zviri saka chaizvo njere uye akandibatsira chaizvo pakuziva kuti ndinofanira kupedza nguva yangu evanhu nevezvenhau. Vazhinji zvinhu waita zvinorondedzerwa zvinhu zvose ndinogona kunzwisisa. Kupedza nguva yakawandisa uri pasocial vezvenhau hakusi kunobatsira mweya wangu Blog yako chaizvoizvo akariisa mashoko kwandiri. Zvakare kuvonga zvikuru
Laurie • Gunyana 26, 2013 pa 10:41 pm • pindura
Patepi pamwe nhamba 4 zvangu. One kurinda – ndatenda
Terrell • Gunyana 26, 2013 pa 11:09 pm • pindura
Thanks kunyora nyaya ino; Nyaya ino kwakanga pakusimbisa.
Clement Magombo • Gunyana 27, 2013 pa 2:25 ndiri • pindura
Mwari akuropafadzei yokuitawo ichi. Ndinofanira kuva vakachena uye anofunga mune chero ndinoita paIndaneti / offline NO. Nyasha norugare
FROM • Gunyana 27, 2013 pa 3:31 ndiri • pindura
Awesome nyaya! Well articulated uye mwero. Thanks chokuita
Elton • Gunyana 27, 2013 pa 6:18 ndiri • pindura
Guilty sezvo mhosva vose 5 pfungwa…Ndinokutendai nokuti ichi.
Adam • Gunyana 27, 2013 pa 7:35 ndiri • pindura
Nyaya ino ukabatwa ziso rangu nokukurumidza nokuti basa rangu riri paIndaneti uye chikamu chikuru chiri evanhu nevezvenhau. Pamberi ichi chaiva basa rangu ndaikwanisa zvachose chokuita ichi. Chaizvoizvo kunogona kuva nguva muparadzi kana pasina nokuzvidzora. Zvinofanira kuva chinhu akaswedera nokunyatsongwarira nokuti chokwadi!
Nisha • Gunyana 27, 2013 pa 9:32 ndiri • pindura
Ndakaona linked ichi pamusoro wangu Facebook uye akanga dreading kuriverenga nokuti ndaiziva kuti zvaizova ini mhosva uye nhasi ndikati, “OK… Ndipeiwo nazvo.” lol. Just zvose muno ndezvechokwadi sei Ndinopedza nguva yangu paIndaneti uye ndiri kuenda kufunga kuti munhu akanyora nyaya ino ingadai isina anamira ichi kana akanga asina mutsimba ichi achizvishatisa neimwe nzira. Saka zviri zvakanaka kuziva kuti pane vamwe vanhu vane kutakura kana akaita kutakura mutoro iwoyo. Kuchechi iwe zvinoodza sokuti haufaniri kubvuma kuti zvinhu zvakadai, nekuti isu ndakasika pfungwa yokuti hapana munhu anotambura nayo. Just rimwe zuva ndakanga ndichitaura murume wangu uye achimuudza kuti Ini dzadzimwa vamwe Apps pamusoro wangu iPod (hongu Ndichine ane iPod uye kwete iPhone, nokuzvisarudzira) nokuti makasika hakuvaki / isingadi mafungiro. Ndinoshandisa kutamba Home Design apo wagadzira hope dzako kumba uye ivowo ndaizova mwoyo zvokuti imba tiri kurarama. Ndichiri kungoda kuridza Mall World musi FB uye akareurura kuti murume wangu kuti ndinofarira nekuti Avatar wangu munhu handisi, iye ari tsvarakadenga, onda, independant uye ndezvokungofungidzira kuti ndinofarira kurarama kuburikidza. Pamwe ndabvunzisisa shamisa kana vanhu vangafunga ndakaudzawo yakawandisa asi izvi pachake nezvandinodavira. Ndinokutendai nokuti unowedzera zvandinoziva nokuudzawo pachako chivimbo chako nesu munyori uye nezvimwe commenters.
ChinaJohnson • Gunyana 27, 2013 pa 11:44 ndiri • pindura
Ndichava deleting wangu Facebook uye Instagram kwekanguva. Iri raiva wangu mukai vachikotsira. varume vangu yave ndichikuudzai izvi uye discontentment yave ndanyura! Ndinokutendai Jessica!
Aaron • Gunyana 27, 2013 pa 1:04 pm • pindura
elnaz ichi ichokwadi saizvozvo.. sezvinei, ndava akabvisa pasocial network yangu nhoroondo 3 makore apfuura :D
Richard • Gunyana 27, 2013 pa 1:46 pm • pindura
Josue • Gunyana 27, 2013 pa 9:59 pm • pindura
Ndizvo chaizvo! Got ini thinkin!
RJ • Gunyana 30, 2013 pa 6:21 ndiri • pindura
Ndatenda! Ndiri gonna kutora vhiki refu uzorore Facebook, Email, uye Instagram uye basa iri ukama avo ndine nevanhu ndinoona muupenyu hwangu zuva nezuva.
Tyler • Gunyana 30, 2013 pa 7:21 ndiri • pindura
Fantastic zvinhu! Ndiri kuchikoro mudzidzi mukuru uye chikamu pamusoro vachiisa zvikuru Nehunde kupinda retweet uye rinofarira ndezvechokwadi zvokuti! Zvechokwadi ndinofunga zvavo zvimwe zvinhu zvakanaka zvinogona kubuda Twitter / Facebook asi zvose pamusoro apo iwe mwoyo!
THOMASSINGWA • Gumiguru 3, 2013 pa 12:51 ndiri • pindura
Wow Ndinovonga Mwari kuti zvakanyorwa kuti ini,dai upenyu mupi nguva dzose akuropafadzei uye vako family.Trip yagara munhu mazuva The Music,writtens nezvimwewo ndirambe awake.we tichivonga Mwari nokuda kwenyu
mushana • Gumiguru 3, 2013 pa 11:17 pm • pindura
Facebook vakasununguka neChishanu?! Join ini! :P mwedzi yose October!
Taurai: Nokuti Kuda Lupe
Miranda • Gumiguru 8, 2013 pa 1:38 ndiri • pindura
Chaizvoizvo zvakanaka romukova! Social vezvenhau Zvingada rakawandisa asi kana ndinoona mweya kuzadzisa uye vari wakasimwa muchechi nemhuri dzavo uye vachishumira mukereke uye munharaunda yavo mhuri.. Ndicho zvinoshamisa kwandiri.
Keinya • Gumiguru 18, 2013 pa 5:11 ndiri • pindura
Wow. Izvi chaizvo akataura neni uye ndinozvifarira. Chiri saka zvakanaka articulated uye ane vamwe zano zvikuru nzira kuratidza. Ndatenda!
Marjorie • Gumiguru 21, 2013 pa 7:15 pm • pindura
Ndinokutendai nokuti vaiswe ichi! Ndinofara chaizvo Mwari akanditungamira kuti Blog renyu nhasi nokuti ndiri kunyatsoona aifanira kuverenga ichi!
Jerdon • Gumiguru 31, 2013 pa 2:03 pm • pindura
Ndinofarira kuuya Blog ichi uye kuverenga zvose mapango izvi zvinotyisa Trip uye wake. Ramba wakadaro rakanaka imi vaviri!!! Mwari komborera.
pelumi • Mbudzi 3, 2013 pa 9:47 pm • pindura
ichi chete akandipa zvakawanda kuti ndakafunga
Trip uye mhuri yake zvikomborero wakachena.
TheMesenger • Mbudzi 8, 2013 pa 8:54 ndiri • pindura
Izvozvo zvinoitika dzimwe nguva handitika ????
TheMesenger • Mbudzi 8, 2013 pa 8:51 ndiri • pindura
Ndizvo Sooooo vechokwadi zvinogona kutora nguva kure mwari nemiwo uchava sevasingavhundutswi nguva 4 iye isu tichati rugure kuti nguva
katš • Mbudzi 17, 2013 pa 12:05 ndiri • pindura
rinotyisa iverengwe. anobvumwa, Ndinopedza nguva yakawanda achitarisa vakanaka vakomana uye zvinhu zvinoyevedza uye kubatwa achikwira zvose izvi asingafungi zvinhu tumblr kuti Ndinowanzotaura kusunda Mwari parutivi. zviri inosuwisa, zvinosuruvarisa chinhu; ndaigona kuverenga pamusoro shoko rake uye kupedza nguva yakawanda naye….ngaavongwe nokuti ziso opener!
mutsa • Zvita 28, 2013 pa 5:57 pm • pindura
Wow. Ndakafunga kuti kuita zvakanaka nokuti ndakanga network chete miviri. Zvechokwadi ichi kwakandibatsira tarisa ini. Ndakafunga nekuti ndakanga vasingatadzi Ndaiva kukuvara, uye chokwadi pane nguva dzose pokuvandudza.
kuhwanda • Ndira 30, 2014 pa 10:29 ndiri • pindura
Mwari akuropafadzei nokuda kugoverana ichi uye mazviita! This post zvanyanyisa neni kufunga nezvenguva Ini kupambadza vasafurirwe venhau uye ayo network. Yakandibatsira kuzodzosera kufunga zvandiri kuita pamwe nguva.
tsitsi • Kukadzi 17, 2014 pa 3:56 pm • pindura
Ndinobvumirana ose pfungwa. Ini nokuti chokwadi dzave tichidzivisa Instagram nokuti ndakazviwana kuenzanisa ndizvivimbe vamwe vasikana ipapo. Hazvina kunaka kuti anzwe romora. Ndinoda kutarisa mhuka akanaka. Lol
Ndakafunga deleting FB wangu, Instagram nhoroondo dzakawanda nguva. Ndinofunga kuti zvakanaka kuti tirambe vomumhuri kure nakure zvazvo. :)
musha Decor • Kurume 5, 2017 pa 3:30 ndiri • pindura
Excellent Blog! Une yokutenda uye zvahungava hwakaita zvakavimbika vanoda vanyori?
Ndiri kuronga kutanga website yangu nokukurumidza asi ndiri zvishoma yakarasika pane zvose.
Ungada zvamaronga uchitanga akasununguka pakakwirira sezvinoita WordPress kana kuenda kuti akabhadhara nezvechisarudzo? Pane nzira dzakawanda kwazvo ikoko kuti Handitombobvumirani kukurirwa ..
chero pfungwa? Ndatenda!